September 2014 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Firmware တင်နည်း Phone Application နည်းလမ်းများ
Flash Tool Firmware တင်နည်း
Maung Pauk at 11:22:00 PM 0
Step 1: USB Driver မရှိသေးရင် အောက်မှာ ဒေါင်းပြီး ကွန်ပျူတာမှာ တင်ထားလိုက်ပါ..
Step 2: ဖုန်းကို Power Off လုပ်ပြီး Battery ကိုဖြုတ်ထားလိုက်ပါ..
Step 3: Download လုပ်ထားတဲ့ Flash Tool Firmware ကို ဖြည်ထားပါ။
Step 4: အောက်ကလင့်မှာ Flash Tool ကို ဒေါင်းပြီးဖြည်ချလိုက်ပါ.. အောက်ပါတိုင်း မြင်ရပါမယ်..
Step 5: ဖြည်ချထားတဲ့ Flsah Tool တွေထဲက အပြာရောင်လေးနဲ့ Flash_tool.exe ကို Run လိုက်ပါ..
Step 6: ညာဘက်နားက Scatter-Loading ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်ပြီး ဖြည်ချထားတဲ့ Flash Tool Firmware တွေထဲက Scatter နာမည်ပါတဲ့ txt ဖိုင်ကို ရွေးပြီး Open လုပ်ပါ..
Step 7: အပေါ်နားလေးက Download Button ကိုနှိပ်ပါ..
Step 8: ဖုန်းကို ဒီအတိုင်း ဘက်ထရီမပါဘဲ ကွန်ပျူတာမှာ ချိတ်လိုက်ပါ.. ကွန်ပျူတာမှာ ချိတ်ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းထဲက Volume Down or Volume Up key တစ်ခုခုကို နှိပ်ထားပေးလိုက်ပါ.. ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကို အလိုလို သိသွားပါမယ်..
Step 9: Firmware တင်နေတာကို တွေ့နေရမှာဖြစ်ပြီး ပြီးသွားရင်တော့ အစိမ်းရောင် ဝလုံးလေးပုံနဲ့ Download OK ဆိုပြီး ပေါ်လာပါမယ်.. Flash Tool ကိုပိတ်ပြီး ဖုန်းကို ဖြုတ်လိုက်ပါ.. ဘက်ထရီတပ်ပြီး ပါဝါဖွင့်နိုင်ပါပြီ..
Click On Me First Please !
Phone Application Root Tools
Vroot 1.7.9.2 Version 4.4.2 ဖုန်းတွေလည်း Root လို့ရပီလို့ပြောပါတယ် Download
Than Toe Aung at 8:01:00 PM 0
Vroot update version ကို လိုအပ်သူများအောက်ကလင့်မှာ Download ယူနိုင်ပါပြီ Download : 11.5 Mb Link 1 Link2Link3Link4Link6အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Rooting Samsung Rooting နည်းလမ်းများ
Samsung Galaxy core2Android 4.4.2 Root Guide
Than Toe Aung at 7:55:00 PM 0
ကို Root ဖောက်လို့ရပါပြီ
Cwm တင်စရာမလိုပဲဖုန်းနဲ့ Root ဖောက်လို့ရပါပြီတင်ပေးထားတဲ့
ဒေါင်းပြီးဖုန်း SD card ကိုပြောင်းထားပါ
apply update from external storage ဝင်
ဒေါင်းထားတဲ့ UPDATE Kinguser.3.4.0.zip ဖိုင်ကို install ပေး ရုံပဲရပြီး
iOS Software မြန်မာဖောင့်ပြဿနာများ
How To Fix ttKeyboard Error
Than Toe Aung at 4:32:00 PM 0
iOS 8 အတွက် third-party မြန်မာကီးဘုတ် "ttKeyboard" ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ မြန်မာစာတွေကို Jailbreak လုပ်စရာ မလိုတော့ပဲ အလွယ်တစ်ကူ ရေးသားနိုင်ပါပြီ..
"ttKeyboard" နဲ့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေသူများ ရှိသကဲ့သို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေကြသေးတဲ့ သူအချို့လည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အများဆုံး ဖြေရှင်းပေးနေရသော ပြဿနာမှာ "ttKeyboard" ကို သွင်းယူလိုက်ပြီးနောက် Keyboard မတက်ပဲ 'Blank' သာ ဖြစ်နေပြီး ဘာမှ ရိုက်လို့မရတဲ့ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး အဆင်ပြေသွားစေတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..
နည်းလမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာလေးတွေကို အရင်ပြောပါမယ်...
လက်တစ်လော မိမိ Device နဲ့ ရိုက်ယူထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေရှိရင် iCloud နဲ့ BackUp လုပ်ပါ (သို့) Computer နဲ့ ချိပ်ဆက်ပြီး "DCIM" folder တစ်ခုလုံးကို copy ကူးယူထားပါ။
Mail, Contects အစရှိသည်တို့ကို iCloud နဲ့ BackUp လုပ်ပါ။
မိမိ Device Activation အတွက် Apple ID နဲ့ Password ကို မှတ်သား သိရှိထားပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။
Wi-Fi connection (သို့) iTunes နဲ့ ချိပ်ဆက်ရန် Internet connection ရှိနေရပါမယ်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များ အားလုံးပြီးပြည့်စုံပြီ ဆိုပါက...
Settings -> General -> Reset -> Erase All Content & Setting ကို နှိပ်ပြီး Reset ချလိုက်ပါ။
Apple Reset ချပြီးနောက် Activate လုပ်ပါ။ အားလုံးပုံမှန် ဖြစ်သွားပြီးနောက်တွင်
၁) မြန်မာစာဖောင့်ကို MyFont install လုပ်ပြီး သွင်းပါ။
၂) မြန်မာစာကီးဘုတ် ttKeyboard install လုပ်ပြီး သွင်းပါ။
>> How To Install Third-Party Keyboard
"ttKeyboard" ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သွားပါပြီ..
Than Toe Aung at 4:28:00 PM 0
﻿✆﻿download✆ http://pc.cd/Uh1 ﻿
အသုံးပြု နည်းကြည့်ရန်. http://pc.cd/uj1 ref:
· ဖုန်း ဆော့ဝဲ များ စုစည်းရာ
.Pac Stock Rom ကို Research Download (Spreadtrum Upgrade Tool) သုံးပြီး Firmware တင်နည်း
Maung Pauk at 11:54:00 PM 0
Spreadtrum Chip သုံးထားတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် .Pac နဲ့ဆုံးတဲ့ Firmware အမျိုးအစားတွေကို တင်တဲ့အခါ Research Download Tool ( Spreadtrum Upgrade Tool ) ကိုသုံးပြီး Firmware ပြန်တင်ကြရပါတယ်.. Research Download Tool ( Spreadtrum Upgrade Tool ) သုံးပြီး Firmware ပြန်တည်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
သတိ: ဖုန်းမှာ အနည်းဆုံး ဘက်ထရီ 40-50% ရှိနေရပါမယ်..
Step 1: ဖုန်းထဲမှာ USB Debugging ကို Enable လုပ်ထားပါ.. ( USB debugging ကို Enable လုပ်ဖို့ Settings > Developers Option > USB Debugging > ကိုသွားပြီး အမှန်ခြစ်ပေးပါ )
Android 4.2.2 နဲ့အထက်တွေမှာ Settings > About Phone > Built Number ကို (၇)ကြိမ်နှိပ်ပြီးမှ Developer Option ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်.. )
Step 3: Research Download (Spreadtrum Upgrade Tool)ကို အောက်မှာဒေါင်းပြီး ဖြည်လိုက်ပါ..
Step 4: Research Download (Spreadtrum Upgrade Tool).exe. ကို run ပါ
Step 5: ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ပါ..
Step 6: ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်မိတဲ့အခါ Load Packed Button ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းထားတဲ့ .pac ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..
Step 7: ပြီးရင်တော့ မြားလေးနဲ့ Start Downloading button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
Step 8: ပြီးရင်တော့ ဖုန်းက Restart ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာပါမယ်.. ခဏကြာရင် ပြီးပါပြီ...
Nokia Firmware တွေကိုအလွယ်တကူ Download နိုင်မည့် Nokia Firmware Suite v2.0
Than Toe Aung at 10:43:00 AM 0
မိမိဖုန်းရဲ့ Product Code ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Firmware Download ဆွဲလို့ ရပါတယ်။ သူ့ ဆော့ဝဲထဲကနေ Download ဆွဲလို့ ရသလို့ Copy Links လုပ်ပြီး IDM မှာ Add URL လုပ်ပြီး IDM နဲ့ Download ဆွဲလည်းရပါတယ်။
Fonts iOS Software Mobile Fonts
Than Toe Aung at 10:42:00 PM 0
iOS 8 က Custom keyboard ကို install လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် Myanmar developer များက မြန်မာ iOS user များအတွက် Keyboard App များကို ကြိုးစား ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်...
အဲဒီကီးဘုတ်တွေထဲကမှ"Mogok" "LikeBook" "Tmusic Player" တို့ကို ဖန်တီးရေးသားခဲ့သူ iOS Developer ကိုဟိန်းသက်ခင်ဇော် ရဲ့ "ttKeyboard" App လေးကို ကြိုတင်ကာ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ..
"ttKeyboard" App လေးက ယခုစာရေးနေတဲ့ အချိန်ထိ Apple iTunes AppStore မှာ တရားဝင် တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Apple ရဲ့ approval ကို စောင့်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်...
25.09.2014 : မှာတော့ "ttKeyboard" ကို တရားဝင် ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ..
>> ttKeyboard Download
ပထမဦးစွာ "ttKeyboard" ကို စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်ပေးခဲ့သော ကိုသန့်သက်ခင်ဇော် အား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..
ကျွန်တော် စမ်းသပ်အသုံးပြုခွင့် ရခဲ့တဲ့ "ttKeyboard" ဟာ version 1.1-2b(65) ဖြစ်ပါတယ်။
"ttKeyboard" မှာ "Zawgyi" နှင့် "Zawgyi (Non Smart)" option နှစ်ခုပါဝင်ပြီး "Zawgyi" သည် smart zawgyi ကီးဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်...။
"ttKeyboard" ဟာ ကျွန်တော်တို့ ရေးသားနေကြ jailbreak keyboard ရဲ့ လက်ကွက်အတိုင်းဖြစ်လို့ သုံးရတာ လွယ်ကူသလို smart zawgyi လည်း ဖြစ်တာမို့ စာရိုက်ရတာ အလွန်လျှင်မြန်ပါတယ်။
အက္ခရာတွေ တော်တော်များများကို long-press နှိပ်လိုက်ရင် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ် စာလုံးတွေ ထပ်မံရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ပတ်ဆင့်များ ရေးသားဖို့အတွက် "အပြာရောင် (alt)" ကီးကို နှိပ်ပြီး ထပ်ဆင့်လိုသော စာလုံးကို ရိုက်လိုက်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
App ကို ဖွင့်လိုက်ရင် ရိုက်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက်ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်..
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကီးဘုတ်ပုံများကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်...
"ttKeyboard" ဟာ ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ကောင်းမွန်မြန်ဆန်ပြီး သုံးစွဲသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေလိမ့်မယ်လို့ ပြောရဲပါတယ်...
"ttKeyboard" ကို Free version အဖြစ် ထုတ်ပေးဖို့ % များတယ်လို့ ကိုသန့်သက်ခင်ဇော် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
"ttKeyboard" အမြန်ဆုံး Store ပေါ်ရောက်ပါစေလို့ ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းရင်း အတူတူ စောင့်လိုက်ကြရအောင်လား ခင်မျာ....
Credit to : သန့်သက်ခင်ဇော် http://www.moethagyarr.info
Firmware Phone Application Samsung
S5360B bootloop Soft Brick Solve Firmware
Than Toe Aung at 2:21:00 PM 0
S5360B firmware တင်သော်လည်းတက်မလာတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် ဒီ Mulit Full ဖိုင်စုံ Firmware နဲ့ဖြေရှင်းရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
E;\_Can't Mount error
Download Firmware S5360B
Download Pit+Odin S5360B
Fonts iOS Software Mobile Fonts Phone Application
iOS 8 တွင် မြန်မာဖောင်. နှင်. ကီးဘုတ်သွင်းနည်း ( Non - Jailbreak)
Than Toe Aung at 2:10:00 PM 0
iDevices အသုံးပြုရာအတွင် iOS7အထိ Jailbreak ရ မှ သာ မြန်မာကီး ဘုတ်ကို အသုံး ပြုလို.ရသော်လည်း iOS 8 တွင် Jailbreak လုပ်စရာ မလိုဘဲး ( Thard-Party Keyboard) မြန်မာဖောင်. နှင်. ကီးဘုတ် ကို အသုံးပြုလို.ရပါပြီ......Black Keys လို.အမည်ရသော Application ကို Apple Store တွင် $ ဖြင့်ဝယ်ယူအသုံးပြု.ရပါမည်။
အောက်ကလင်.တွင် ဝင်ပြီး ဝယ်ယူပါ။
install လုပ်ပြီးပါက မြန်မာဖောင်.သွင်းရန် install missing fonts ကိုဝင်ပါ။
Myanmar Zawgyil ကို install လုပ်ပေးပါ။
ZawGyi Font ကို install လုပ်ပြီးလျှင် Keyboard သွင်းရန် အတွက် Setting > General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard > Black Keys ကိုဝင်ပြီး Burmese-Zawgyi ကို Enable လုပ်ပေးပါ ခင်ဗျ။
Magic Slot Linkline for Android Game လေးပါနော်
Kyaw Myo Tun at 8:23:00 AM 0
အချိန်လည်း မြန်ဆန်စွာ ကုန်စေပါတယ် ဒီgame
လေးကတော့ ခလုပ်တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့
random ပစ္စည်းတွေ ကျလာပါလိမ့်မယ် ဒါကို
မိမိကရွေးချယ် အမှတ်ယူပြီး အခန်းအောင်အောင်
လုပ်ရပါမယ် အောက်မှာလည်း ပုံလေးတွေ ပြသထားပါတယ်
facebook လုပ်ချင်သူများနဲ့ download အဆင်မပြေသူများ ဖတ်ပေးပါရန်
Wordsearch for Android Game
Kyaw Myo Tun at 7:07:00 AM 0
မိမိက ရှာဖွေပြီး k ကနေထိပြီး y ထိ ဆွဲလိုက်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရှာဖွေရင် ပိုပျော်စရာကောင်းပါ
တယ် အမြန်တွေ အချိန်ကုန်သက်သာ တာပေါ့
အချိန်ကလည်း စဆော့ကတည်းက စပြီးအလုပ်လုပ်နေမှာပါ စိတ်ဝင်စားရင်
Android Application Tool
တစ်နေရာထဲမှာ ရနိုင်မယ့် EASY TOOL လေးတွေပါ
Kyaw Myo Tun at 6:37:00 AM 0
တစ်နေရာထဲရှိနိုင်မည့် easy tool လေးပါ
(1)Easy battery saver
(3)Easy task killer
(4)Easy app manager
မောင်ပေါက်< Knowledge Note>
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 3:19:00 PM 0
Android Application Language
C++ programming Language လေ့လာနေသူများအတွက်
Kyaw Myo Tun at 5:30:00 AM 0
C++ ကို လေ့လာနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်
နဲ့ ရှင်းပြထားတာပါ။ လေ့လာသူတွေ ပိုသိမှာပါ
C programming Language for words
Kyaw Myo Tun at 5:28:00 AM 0
C programming ကို လေ့လာချင်တဲ့ မိတ်ဆွေ
တွေအတွက် အထူးစာအုပ်apk လေးပါ ရေးသား
ထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး သူအကြောင်းကို
ရှင်းပြထားတာပါ if ကို ဘာကြောင့် သုံးတာပေါ့
နာမည်ကြီး Clash Of Clans Game မှာ Google Gift Card ဖြင့် Gems ၀ယ်နည်း စာအုပ် PDF
Myanmar IT Helper at 2:12:00 AM 0
Clash Of Clans မှာ Google Gift Card ဖြင့် Gems ၀ယ်နည်း စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကြိုက်ရာ Link ကနေ Download ရယူနိုင်ပါပြီ
Download Link 1 =>http://www.solidfiles.com/d/75c840ea73/Clash_Of_Clans_____.pdf
Download Link2=> https://www.mediafire.com/?yelzfq7gc8k87yk
09 420 700 582
Myanmar Online Payment & Money Exchanger
( PayPal , Perfect Money , Egopay , Google Gift Card , Skype , ..etc )
First & Reliable Money Exchange System.
Apple iOS Phone Application
iOS 8 Firmware Download
Than Toe Aung at 1:06:00 AM 0
Java programming Language လေ့လာသူများအတွက်
Kyaw Myo Tun at 2:40:00 PM 0
kaungkalay တင်ပေးလိုက်တဲ့ language
တွေက မိမိကြိုက်ရာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
ဒါကတော့ Jave programming ဖြစ်ပါတယ်
အချက်အလက်နဲ့ sentence နဲ့ ရှင်းပြထားတာပါ
Than Toe Aung at 11:10:00 AM 0
ကျွန်တော်တို့ Paypal အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ကိုဝယ်ပေးလိုက်တဲ့သူ ဥပမာ အဲဒီလူက Skype သုံးတယ်ဆိုရင် PayPal Billing Agreement ထဲဝင်သွားပြီး နောက်တခါဝယ်မယ်ဆိုရင် Paypal အကောင့်ကနေ သူဝယ်ဖို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့အော်တို Paypal account ၀င်စရာမလိုဘဲ ၀ယ်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီအချက်ကိုပိတ်မယ့်နည်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ပထမဆုံး Paypal.com ကိုသွားပြီးကိုယ့်အကောင့်ကို Login ၀င်လိုက်ပါ
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Profile ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.
နောက်တမျက်မှာ, y “My money > My pre-approved payment”. Update အဆင့်ဆင့်နှိပ်ပါ
Update ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်သဘောတူထားတဲ့ Payment တွေပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲဒီထဲကမှကို Billing Agreement ပိတ်ချင်တဲ့ Godaddy ပ်ိတ်ချင်တယ်ဆို Godaddy Skype ပ်ိတ်ချင်တယ်ဆို Skype ကိုနှိပ်ပါ
Godaddy နှိပ်ပီးတာနဲ့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းActive ဘေးက Cancel ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
Cancel, ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ Yes ကိုနှိပ်ပါ
Skype ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်လဲ Payment မှာကိုယ့်အကောင့် Billing Agreement ရှိနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး :D
Blog Archive May (71) April (47) March (15) February (5) January (20) December (41) November (18) October (4) September (11) August (20) July (41) June (41) May (23) April (20) March (22) February (23) January (28) December (21) November (57) October (59) September (72) August (111) July (181) June (146) May (136) April (289) March (234) February (227) January (154) December (90) November (107) October (105) September (90) August (146) July (119) June (96) May (158) April (89) March (114) February (193) January (156) December (154) November (133) October (87) September (57) August (78) July (73) June (61) May (48) April (49) March (78) February (292) January (130) December (124) November (117) October (153) September (240) August (178) July (154) June (136) May (141) April (112) March (97) February (149) January (93) December (39) November (11) October (46) September (13) August (4) May (2) April (3)